Isilumkiso ngophawu lwerhamncwa 666
Ibhayibhile iyasilumkisa malunga nolu phawu -kwayimfanelo yethu yobuKristu ukwenza njalo. 195
Awusindiswanga kuba ungumSilamsi ongumYuda okanye ulifanasini
Musa ukuzivumela ukuba ukhohliswe 71
Kuyinyani malunga ne-FO Nilsson
Ileta yokuqala yePentekoste yaseBhaptizi 151 2
UYesu wayelingana noThixo, waba ngumntu, wasweleka emnqamlezweni kwaye uThixo wamphakamisa
Ibhayibhile icacisa ukuba ngubani uYesu. 1
Iselfowuni yedijithali iziyobisi- ngabom zenziwe iziyobisi
Lixesha lokuba sizilumle, kunye nabantwana bethu, kwiselfowuni elutha kakhulu. 18
Aba bathathu banye
UYise, uNyana noMoya oyiNgcwele banye. 11
Umenzi wobubi wakhwaza uAllahu akbar xa wayehlaba abantu eVetlanda
Isikhalo sedabi lamaSilamsi savakala eVetlanda-Ingqina liyatsho 15
Uhlaselo lobundlobongela kwiindawo ezi-5 eVetlanda - 8 zenzakele
Bona iividiyo ezininzi! Ubunqolobi buhlasele kwiindawo ezintlanu eVetlanda, ezine zenzakala kakhulu. 0
Ijelo leTikTok Apg29.nu -Ngoku ngaphezulu kwama-22,000 abalandeli
Ijelo likaChrister Åberg libe yimpumelelo kwi-intanethi. 1
USuku lweSono lweHlabathi - Ngaba lukhona?
Ngaba ukhona umhla onikela ingqalelo kwizono zehlabathi? 7
Vecka 16, fredag 23 april 2021 kl. 19:05